देश कंगाल बनाऊन खोज्नेहरु ! | newsnepali.com
देश कंगाल बनाऊन खोज्नेहरु !
विजय ज्ञवाली, २१ कात्तिक, काठमाडौं ।
यत्रो आफ्नै निजी महल हुंदाहुंदै किन समग्र राष्ट्रको बेईज्यत? देशले डा. चन्द्रमोहन यादव, इन्जिनियर चन्द्रशेखर यादव र सुश्री अनिता यादवको पितालाई प्रथम गणतान्त्रिक राष्ट्रपति बनाको थियो हो?
थाहा छैन, को थिए गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्ट्रपति – गणतन्त्रका विरोधीहरुलाई। तर जसले त्यो बेला कमल थापाहरुको सरकारको गोली खाएर लडेका थिए, दुर्जकुमार राईहरुको निशाना थापेर ‘गणतन्त्र जिन्दावाद’ भनेका थिए, ती चाहिं जान्दछन् देशले पहिलो नागरिक राष्ट्रपति बनाका थिए।
त्यस्तो नागरिक जो स्वाभिमानको पर्याय, नैतिक ईमानको उचाईमा सगरमाथा भन्दा उँचो। सदाचारी, सहिष्णु, वेदागी र त्यागी। किनभने त्यो देशप्रमुख, बदलिएको व्यवस्थाको पहिलो नेतृत्वकर्ता लोभी नहुनेलाई बनाका हुन्। त्यो पौरखी भनेर बनाका हुन्।
यी र यस्ता प्रश्नहरु अब जनजनबाट सोधियोस्। किनकी राज्यको तीन करोड बढी गैसक्यो अब डा. रामवरणलाई । यी नमरुन्जेल अब यो सहायतामा पूर्णविराम नलाग्ला । पंक्तिकारको पूर्ण सहमति व्यक्ति रामवरणको उपचारमा सहायताका लागि ।
तर पूर्ण विमती र कटाक्ष यस्ता गणतान्त्रिक सेता हात्तिहरुको विपक्षमा । तपाईको के मत छ पाम । सदर बदर जनताले गर्लान । गणतन्त्र दुव्लाउदै, रोगउदै गाको रामवरणहरु प्रवृत्तिले हो, गणतन्त्रका हिमायतीहरुलाई समयमा नै चेतना भया ।